Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Chocolate Vegan Sensual Vaovao
Tahaka ny firavaka sarobidy ao anaty boaty firavaka, ny praline ganache tsara an'i Nhiär dia manjelanjelatra ao anaty baoritra tsara tarehy. Natao tamim-pitandremana tsara sy natao tanana am-pitiavana, ny vatomamy sôkôla dia mifototra amin'ny akora avo lenta.
Kakao nambolena ara-boajanahary avy amin'ny tehezan-tendrombohitra maitso mavana ao amin'ny Andes any Però, nasiana mamy avy amin'ny voankazo moanina. Ronono mifototra amin'ny zavamaniry avy amin'ny voaniho na oats mitambatra amin'ny voanio kakao manankarena mba hahazoana endrika malefaka sy silky. Tsy misy rononon-biby, tsy misy siramamy voadio, tsy misy sira manelingelina ny vegan, ny fahafinaretana. Natao tsirairay ary voaravaka amin'ny loko mahamamo avy amin'ny fiaviana voajanahary.
Sarah Anyieth dia nandova fomba fahandroan'ny fianakaviana taloha miaraka amin'ny ody ara-nofo amin'ny fomban-drazana saika adino sy fombafomba misy ao anatiny. Tsy niova ilay fomba fanamboarana raha tsy nanao dingana feno herim-po i Sarah ka namerina nandika ilay fomba fanaovana sôkôla izay tian'ny taranaka maro.
“Sarotra ny mahita sôkôla tsy misy emulsifier, stabiliser, vokatra vita amin’ny ronono, ary siramamy voadio. Miaraka amin'i Nhiär, manolotra sôkôla matsiro izahay ankehitriny amin'ny endrika vegan, mifototra amin'ny zavamaniry. Manatitra sakafo sôkôla izahay ho an'ny olona miahiahy momba ny fahasalamana izay te hanome valisoa ho an'ny tenany indraindray, ”hoy izy. Mirehareha amin'ny fampiasana akora organika, avo lenta, voajanahary ary ara-etika i Sarah. Ny vokatra dia avy amin'ny mpamokatra organika voamarina ao amin'ny Fair-Trade.
Ity firaiketam-po madio amin'ny endrika sôkôla ity dia manentana ny mpankafy ankoatry ny vondrom-piarahamonina vegan. Na ireo mpandala ny nentim-paharazana sôkôla henjana aza dia midera ny zavakanto mamy ary midera ny sôkôla Nhiär ao amin'ny media sosialy.
Iniana atao tery ny vokatra vokarin'i Nhiär. Mandefa ny vokatra vita tanana amin'ny vegan any Etazonia i Sarah, boaty kely misy bonbon sôkôla efatra na boaty lehibe misy bonbons 24 - fanomezana tonga lafatra ho an'ny ora romantika ho an'ny roa na fanasana amin'ny takariva fisakafoanana manara-penitra.